स्व.राजा वीरेन्द्र भन्नुहुन्थ्यो – जनताको करबाट चल्ने हाम्रो खर्च, जथाभावी खर्च गर्नु हुँदैन…हेर्नुहोस् । – yuwa Awaj
मंग्सिर १५, २०७७ सोमबार 7
काठमाडौं : २०५८ जेठ १९ गते राति राजदरबारभित्रै ह’त्याका’ण्ड भएको खबर सुनेपछि भोलिपल्ट हजारौँ जनता सडकमा आए। राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्व’र्यलगायत राज परिवारका आठजना सदस्य एकै ठाउँमा मा’रिएको सो घ’टना सम्झिँदा आज पनि हामीलाई पी’डा हुन्छ।
राजा वीरेन्द्रको ह’त्या भएको खबर केही घन्टामै संसारभरि फैलियो । करोडौँ नेपाली स्त’ब्ध भए। धेरै विदेशीले पनि हार्दिक स’मवेदना प्र’कट गरे। कैँयन् राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष, राजनेता, सरकार प्रमुख, कूट’नीतिज्ञ, वि’द्वान वि’दुषीले ग’हिरो दुःख व्यक्त गरे । राजा वीरेन्द्र आज पनि अधिकांश नेपालीका हृद’यमा उत्तिकै सम्मानित, स्मरणीय र आदरणीय छन् । यो समाचार युवराज गौतमले लेखेका हुन्
उनको कार्यकालमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव कोफी अन्नान र हाभियर पेरेज द कोय्यार, स्वीट्जरल्यान्डका राष्ट्रपति प्रोफेसर आर्नो’ल्ड कोलर भारतीय राष्ट्रपतिहरू ज्ञानी जैल’सिंह तथा केआर नारायणन प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह राव चीनका प्रधानमन्त्री झु रोङ्जी, मंगोलियाका राष्ट्रपति नात्सागिन बागा बन्दी, श्रीलंकाका राष्ट्र पतिहरू रणसिंघे प्रेमदासा र चन्द्रिका कुमारा’तुंगा, जर्मन राष्ट्रपति डा. रोमन हेर्जोग र त्यहाँका
चान्सलर डा. हेल्मुट कोल मात्र होइन, ब्रिटेनकी महा’रानी एलिजाबेथ द्वि’तीय बाट समेत नेपाल भ्रमण हुनु कूटनीतिक दृ’ष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ। यस्तै चीनका राष्ट्रपति लि।स्यान न्यान, फ्रान्सका राष्ट्रपति फ्रा’स्वा मि”तेराँ, माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मौमून अब्दु’ल गयुम र युगो स्लाभियाका राष्ट्रपति मा र्सल जोसेफ बज्र टिटोले राजा वीरेन्द्रको निम’न्त्रणमा नेपाल भ्रमण गरेका थिए भने राजा वीरेन्द्रले अमेरिका, ब्रिटे’न, फ्रान्स, जापान, चीन, भारत
लगायतका धेरै राष्ट्रको भ्रमण गरेर नेपाललाई अन्तर्रा’ष्ट्रिय समुदायमा राम्ररी परिचित गराए।कूटनीतिक दृ’ष्टिले साच्चै असंलग्न राष्ट्र भएकाले नेपालले अन्त’र्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास आर्जन गरेको देखिन्छ । सो काल ख’ण्डमा नेपाल राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्को सदस्य बन्यो । २०३१ फागुनमा राजा वीरेन्द्रले आफ्नो शुभराज्या भिषेकमा विभिन्न साठी राष्ट्रबाट आएका विशिष्ट पाहुना राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र युवराजहरू उपस्थित समारोहमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखे ।
त्यसलाई भारतले समर्थन गरेन तर ११६ राष्ट्रले समर्थन गरे । भारतकै द|बाबका कारण नेपालका प्रतिबन्धित दलहरूले समेत शान्ति क्षेत्र प्रस्तावको वि’रोध गरे। २०२८ माघ १७ गते बिहान चितवनमा राजा महेन्द्रको स्वर्गा रोहण भयो। सोह्र वर्ष दश महिना राजगद्दी सम्हालेका राजा महेन्द्रले जनताको व्यापक समर्थन, सीमित बजेट र स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै विकासको ढोका खोल्दै गए ।
राजा महेन्द्रका जेठा छोरा वीरेन्द्रले आफ्ना पिताले सुरु गरेको विकास अभियानलाई अघि बढाउन अहोरात्र मिहिनेत गरे । देशका कुनाकुनाको पैदल भ्रमण गरे । आफ्नै पिताझैँ उनी गरिब किसानका झु’प्रा झुप्रा’मा पुगेर वस्तुस्थिति अध्ययन गर्थे । जनताको दुःख बुझ्ने प्रयास गर्थे। महेन्द्र राजमार्गजस्तै चीन र भारतसमेत जोड्ने चारपाँच वटा उत्तर दक्षिण राजमार्ग बन्न सकून् भन्ने इच्छा थियो, तर महेन्द्र राजमार्गको कोहलपुर कञ्चनपुर खण्ड पूरा हुन नै अठार वर्ष ढिलो भयो।
भारतको राजनीतिक दबा’बका कारण पनि द्रु’तगतिमा विकास हुन सकेन। तर श्री ५ वीरेन्द्रको शास’नकालमा जति प्रगति भयो, त्यसको उचित मूल्यांकन हुन बाँकी नै छ । सरल स्वभावका थिए, राजा वीरेन्द्र। छलकपट नजान्ने र विकासमा लाग्ने हरूलाई प्रेरणा दिने उनको स्वभाव थियो । उनलाई भेटेपछि आलोचकहरू पनि प्रशंसा गर्दै फर्किन्थे । उनको बालसुलभ मुस्कानमा जादु थियो । सधैँ प्रसन्न चि’त्त देखिन्थे उनी।
गाउँघरतिर जाँदा गाउँलेहरूको सुखदुःख सोध्ने उनको बानी थियो । गाउँलेहरूसँग य’दाकदा ठट्टा पनि गर्थे । उनका एकजना सहयोगी सझिन्छन पू’र्वाञ्चलको भ्र’मणमा जाँदा राजा वीरेन्द्रले एकजना गरिब किसानलाई घरभित्रै पसेर सोधेछन्, घर त सानो छ, कतिजना छन् तिम्रा केटाकेटीरु किसानले हात जोड्दै जवाफ दिए, सरकार, एघार जना छोरा छन् । राजाले ठट्टा गर्दै भने, लौ एउटा फुटबल टिम घरमै रहेछ । तिमी चाहिँ रे’फ्री बन्नू। यस्ता अनेक रोचक प्र’संग छन्, उनको जीवनमा ।
वीरगञ्जमा राजा वीरेन्द्र र महारानी ऐश्व’र्य साधारण पोसाकमा रिक्सा चढेर सहर घुमेछन् साँझपख । राजारानीलाई चिन्न गाह्रो थियो, झम’क्क साँझमा। रि’क्सावालालाई उनले धेरै कुरा सोेधेछन। उसले भनेछ, अञ्चला धीश, सिडिओ, पुलिसको हाकिम, भन्सार हाकिम, मालपोत, भू’मिसुधार सबैतिर घुस खान्छ दाइ । राजाले जे’ल हाल्दिए पनि हुन्थ्यो यस्ता मान्छेलाई ।
राजा आउँदा केके भनेर उनलाई ढाँट्छन् । अरू बेला जनतालाई ठ’ग्छन्। त्यसपछि भ्र’ष्टाचार बारे छानबिन गराउँदै उनले केही कर्मचारी र प्रशासक हरूलाई क’डा निग’रानीमा राखेको र कति पयलाई नसिहत दिएको कुरा वीरगञ्जका पुराना पत्र कार गोपाल गिरीले बताएका थिए। राजा वीरेन्द्रको जीवन खुला पुस्तक जस्तै थियो । २०४६ सालमा राजनीतिक दल’हरूले राजाका अधिकार क’टौती गर्दै ब’हुदलीय व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग गरेपछि नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी नेताहरूलाई बोलाएर उनले छलफल गरे ।
२०४६ चैत २६ गते दलहरूमाथिको प्रतिबन्ध फु’कुवा भयो । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, विकास र स्व’तन्त्रता प्रति संवेदनशील थिए, राजा वीरेन्द्र । २०३६ सालमा उनले जनमत सं’ग्रह गराएका थिए । संसारमा सर्व शक्तिमान राजाले जनताको चाहनाको सम्मान गर्दै जनमत’संग्रह गराएका घट’ना विरलै पाइन्छ। २०२१ सालमा युवराज छँदा वीरेन्द्रले पूर्वाञ्चलका पहाडी जिल्लाहरू भ्र’मण गरे ।
त्यसवेला युवराज वीरेन्द्रले मकै भटमास साग, कोदो फापर आदि गाउँमा जे जे पाइन्छ त्यसैमा सन्तोष गरेर सैनिक पोसा’कमा भ्रमण गरेको उनका सहयोगीहरू बताउँछन। तीन चार जना सिपाही भ्रम’ण दलमा भए पनि युवराज वीरेन्द्र आफ्नो भारी आफैं बोक्थे उनीहरू भन्छन्। राजा वीरेन्द्रका अं’गरक्षक रहेका जनरल शान्तकुमार मल्लले भनेका छन्, महेन्द्र राजमार्ग जस्तै चीन र भारतसमेत जोड्ने चारपाँच वटा उत्तर द’क्षिण राजमार्ग बन्न सकून् भन्ने सरकारको इच्छा थियो ।
तर महेन्द्र राजमार्गको कोह’लपुर कञ्चनपुर खण्ड पूरा हुन नै अठार वर्ष ढिलो भयो । भारतको राजनीतिक दबाबका कारण पनि द्रु’तगतिमा विकास हुन सकेन । तर श्री ५ वीरेन्द्रको शास’नकालमा जति प्रगति भयो, त्यसको उचित मूल्यांकन हुन बाँकी नै छ। २०१९ सालदेखि २०५८ सालमा शाही पा’श्र्ववर्ती एडीसी रहेका मल्ल सम्झिन्छन्, २०२१ सालमा हामी रामेछापको एउटा दु’र्गम गाउँमा पुग्यौँ । झमक्क साँझ परेको थियो ।
एउटी वृ’द्धाको झु’प्रोमा युवराज वीरेन्द्रसहित हामी पिँ’डीमा बास बस्यौँ । त्यो घरकी बूढी आमाको छोरो भारत चीन यु’द्धका बेला भारतीय सेनामा गएको रहेछ घर नआएको तीनचार वर्ष भएको रहेछ । सायद यु’द्धमा मर्यो होला सैनिक पो’साकमा त्यहाँ पुगेका राजा वीरेन्द्रलाई छामछुम गर्दै आमाले अँगालो हालेर भनिन्, यतिका वर्ष कहाँ हराएका थियौ ।
बल्ल आमा सम्झेर आयौ बाबू युवराज वीरेन्द्रबाट हु’कुम भयो, आमा, म तिम्रै छोरो जस्तो हुँ पद यात्राका क्रममा यस्ता धेरै घ’टना देखिए । जनताको वास्तविक अवस्था बुझ्न सजिलो भयो युवराज लाई । राजा वीरेन्द्रको पालामा २०३८ सालमा राष्ट्रिय मूलनीति बनाइयो र २०४२ सालमा संशोधन गर्दै अर्को मूल’नीति तयार पारियो । त्यसमा राष्ट्रिय सुरक्षा, गृह, परराष्ट्र, अर्थ’लगायत विभिन्न विषय समेटिएका छन् । तल्लो निकायलाई आत्भ’निर्भर बनाउन विकेन्द्रीकरण ऐन, २०३९ ल्याइयो ।
Prevबधाई ! संसारकै महान आमा – जस्ले अटो चलाएर दुई सन्तान डाक्टर बनाउने यी महान आमालाई…उच्च सम्मान ।
Nextकोशीको पानी मेची लैजान ४९ अर्ब लगानी गर्दै भारत, नेपाललाई थाहै छैन…हेर्नुहोस् ।